War deg deg ah-: Isku-dhacyo u dhaxeeya Ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Kenya oo ka dhacay Gedo. | RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia
War deg deg ah-: Isku-dhacyo u dhaxeeya Ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Kenya oo ka dhacay Gedo.
January 12, 2018	3,706 Views
Muqdisho-KNN-Wararka naga soo gaaraya gobalka Gedo ayaa soo sheegaya in isku-dhacyo udhaxeeya Ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Kenya uu ka dhacay Xadduuda Soomaaliya iyo Kenya ee degmada Ceel-waaq ee gobalka Gedo.
Saraakiisha Milatariga Soomaaliya ayaa sheegay in isku-dhaca uu yimid kadib markii Ciidamada Kenya ay weerarayn Ciidamo ka tirsan Kuwa Soomaaliya oo ku sugnaa Gudaha Ceel-waaq ee Soomaaliya, Saraakiisha milatariga Soomaaliya ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay.
Qaar ka mid ah Waxay sheegeyn in Ciidamada Kenya ay weerarayn Dhalinyaro ka mid ah Ciidamada Soomaaliya, balse muddooyinkii dambe noqday Maleeshiyo Beeleed ka goostay Ciidanka xoogga oo meel xadduuda u dhaw saldhig ka dhigtay.
Qaar kale oo ka mid ah Ciidamada Xoogga iyo Saraakiisha gobalka Gedo ayaa KNN u xaqiijiyay in saakay xili hore ay Milatariga Kenya weerar ka soo qaadayn Ceel-waaq kenya xili aysan kawar qabin kuwa Soomaaliya.
Xaaladda ayaa hadda caadi ku soo laabatay, waxaana la sheegay in uu istaagay isku-dhicii u dhaxeeyay Labada Ciidan.
Lama oga ilaa khasaaraha ka dhashay, balse waxaa jira Khasaaro soo gaaray Labada dhinac.
La soco wixii ku soo kordha.
Previous: DHAGEYSO:-WARKA SUBAX EE RADIO KULMIYE 8:00AM (12-01-2018)
Next: Qarax ka dhacay gudaha Guri lagu diyaarinayay oo ku yaala D/Kaaraan.